Avianca Airline dia mahita andro vaovao: miala amin'ny bankirompitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Avianca Airline dia mahita andro vaovao: miala amin'ny bankirompitra
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kolombia • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana
Taorian'ny nidirany ny Toko faha-11 tamin'ny 10 Mey 2020, dia nahomby ny fifanarahana tamin'ireo mpampindram-bola, natsangana. fampiasam-bola vaovao mitentina 1.7 miliara dolara, ary nahazo fankatoavana tamin'ny drafitry ny fanavaozana, nipoitra niaraka tamin'ny taratasin'ny fifandanjana mafy, ny fampihenana ny trosa, ary ny 1 lavitrisa dolara mahery.
Avianca dia nanavao ny maodelin'ny fandraharahana mba ho mahomby kokoa, nanamafy ny fanoloran-tenany hanome serivisy azo itokisana sy ara-potoana, manambatra ny tolo-kevitry ny sanda izay ahitana ny toetra tsara indrindra amin'ny zotram-piaramanidina mora vidy, ary mitazona ny fanavahana lehibe izay mamela azy ho mora indrindra. safidy fitsangatsanganana ho an'ny mpandeha an-tapitrisany any Amerika Latina sy izao tontolo izao.
Mibanjina ny ho avy, hanohy hanamafy ny tolo-kevitry ny sandany i Avianca, hanitsy ny vokatra sy ny serivisy amin'ny filan'ny mpanjifany.
Araka ny drafitry ny fanavaozana nankatoavina, dia hampiasa vola ao amin'ny Avianca Group International Limited, orinasa mpihazona vaovao, izay hipetraka any Royaume-Uni, ireo tompon'andraikitra vaovao ary hanamafy ny fampiasam-bolan'ny vondrona amin'ny sampana rehetra ao aminy (anisan'izany ny Aerovias del Continente Americano, ny sampana Kolombiana, ary ny TACA International, ny asany any Amerika Afovoany). Ny orinasa mpihazona teo aloha, Avianca Holdings dia nipetraka tany Panama.